अस्पतालको शैयावाट रबिनाले भनिन्, ‘छोरीको लागि बाँच्न चाहान्छु, बिन्ति छ, बचाई दिनुहोस्’ – Rara Khabar
अस्पतालको शैयावाट रबिनाले भनिन्, ‘छोरीको लागि बाँच्न चाहान्छु, बिन्ति छ, बचाई दिनुहोस्’
वोनम्यारो (एप्लाटिक एनिमिया) को समस्यावाट थलिएकी जाजरकोटको दुर्गम गाउँकी रबिना सिंह बोहराले जीवन रक्षाको लागि सवैसँग सहयोगको याचना गरेकी छन ।
६ महिनादेखि शिक्षण अस्पताल काठमाडौमा उपचार गरिरहेकी उनले रकम अभावले थप उपचारमा समस्या भएको भन्दै सहयोगको याचना गरेकी हुन । रोग पत्ता लागेदेखि अहिलेसम्म उनको उपचारमा ऋण सावट गरेको ५ लाख रुपैया खर्च भएको छ । थप उपचारको लागि अरु १० लाख रुपैया खर्च लाग्ने भएपनि उपचारमा समस्या भएको उनले गुनासो गरिन् ।
अस्पतालको शैयाबाट बिरामी रबिनाले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएर आफना ज्यान बचाई दिन सरकारसँग माग गरेकी छन । उनले भनिन, मर्छुकी भन्ने चिन्ताले सताई रहन्छ, एक्ली भए त मर्न पाएपनि हुन्थ्यो, तर म मरेपछि वर्षदिनकी छोरी कहाँ जाले ? के खाले ? वर्षदिनकी छोरीलाई काखमा लिएर उनले गहभरी आँसु पादै भनिन, म छोरीको लागि बाँच्न चाहान्छु । मलाई बचाउन सहयोग गरिदिनुहोस, दुई हात जोडी विन्ति छ । ६ महिनासम्म नियमित उपचार गर्दा पनि रोग निको नभए वोन म्यारो नै प्रत्यारोपन गर्नु पर्ने अस्पतालले भनेको उनले उल्लेख गरे । अस्पतालले वोन म्यारो प्रत्यारोपन गर्न ३० लाख रुपैया खर्च लाग्ने बताएको रबिनाका श्रीमान राजेन्द्र बोहराले जानकारी दिए । उनले भने, अहिलेसम्म उपचार गर्दा खर्च भएको ५ लाख रुपैयाको लागि घरजग्गा बच्नु पर्यो भने, त्यति ठुलो रकम कसरी जुटाउने ? रातदिनै चिन्ताले पिरोल्ने गरेको छ । ५ लाख रुपैया जुटाउन त घरजग्गा, पशुचौपाय बेच्न वाध्य भए, पछिल्लो पटक दिदीको घरको भैसी बेचेर रकम जुटाए तर अब छिमेकीसँग ल्याएको ऋण कसरी तिर्ने र वाँकी उपचार कसरी गर्ने ? उनले थपे ।
उपचार खर्च जुटाउनको लागि बिरामी श्रीमतिलाई काठमाडौमा छाडेर गोरखाको ध्याम्पे सालमा गएर ४ महिनासम्म घर निर्माणको काम पनि गरिरहेको उनले बताए । जाजरकोटको त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका –४ बाउसेखोला गाउँका उनीको परिवार आर्थिक रुपमा एकदमै विपन्न छ ।
श्रीमतिको उपचारको लागि सहयोग माग्दै नगरपालिकादेखि मन्त्रालयसम्म धाए तर, अहिलेसम्म कसैले पनि सहयोग नगरेको उनले वताए । उनले भने, उपचारको लागि सहयोग त सबैले गछौ भन्छन, तर गदैनन् । नेतादेखि, विभिन्न निकायको दैलामा गए अहिलेसम्म खाली आश्वासन मात्र पाए, कसैवाट सहयोग पाइन । रबिनाको उपचार गदै आएका शिक्षण अस्पतालका डा.अन्जान श्रेष्ठले नियमित उपचार गर्दा पनि ६ महिनाभित्र ठिक नभए रबिनालाई वोन म्यारो नै प्रत्यारोपन गर्नु पर्ने वताए । उनले भने, ४० वर्षभन्दा मुनीकाको उपचार भनेकै वोन म्यारोको प्रत्यारोपन हो, विरामीले उपचार खर्च व्यर्होन सक्छ कि सक्दैन त्यसमा भरपर्छ । साधारण औषधी चलाएर, उपचार सम्भव छैन । डा. श्रेष्ठले वोन म्यारो प्रत्यारोपनको लागि अस्पतालले केही रकम छुट गरेपनि पुरै निशुल्क भने गर्न नसक्ने वताए । उनले भने, वोन म्यारो पत्यारोपन गर्न कम्तिमा पनि १५ देखि ३० लाख रुपैयासम्म लाग्छ ।
डाक्टर केएन पौडेलले एप्लाटिक एनिमिया जटिल किसिमको समस्या भएको बताए । उनेले भने, बोन म्यारोमा समस्या भएपछि हड्डीभित्र नयाँ रक्त कोषहरुको निर्माण हुदैन, त्यसैले समयमै उपचार गर्न नसके विरामीको ज्यानै समेत जान सक्ने खतरा हुन्छ । समयमै उपचार गरे समस्या समाधान हुन्छ ।
२०७३ साल चैत्रको पहिलो सातातिर रबिना एक्कासी विरामी भएकी थिइन । सुरुमा उनलाई टाउको दुख्ने, स्वास प्रस्वास बढने, शरीर धेरै तातिने, हातखुट्टा गल्ने समस्या देखिएको थियो । गाउँकै नीजी मेडिकलमा ५ दिनसम्म उपचार गदै पनि सन्चो नभएपछि थप उपचारको लागि मेडिकल कलेज नेपालगंज आएकी थिइन । रोग पत्ता नलागेपछि मेडिकल कजेल नेपालगंजले रबिनालाई शिक्षण अस्पतालमा रिर्फर गरेको थियो । शिक्षण अस्पतालमा उपचार थालेको २६ दिनपछि मात्र उनलाई एप्लाटिक एनिमिया भएको पत्ता लागेको थियो ।
प्रकाशित मितिः २९ भाद्र २०७४, बिहीबार ०५:३१